Amanoveli angu-6 obugebengu afika ukukuxhuma | Bezzia
Amanoveli wobugebengu ayi-6 eza ukukuxhuma
UMaria vazquez | 10/06/2021 12:00 | Izindaba
Uyathanda ukufunda amanoveli obugebengu? Uma lolu hlobo lohlobo olukujabulisa kakhulu, qaphela izihloko esabelana nawe namuhla. Lezi zinoveli eziyisithupha zobugebengu zisanda kungena ezitolo ezidayisa izincwadi noma ziyeza maduze, buza ngazo! Kutholakala ezindaweni ezihluke kakhulu, bathembisa ukungabaza, izingqinamba, ukungezwani ...
1 Impilo Eyimfihlo yase-ularsula Bas
2 Phakathi kobusuku
3 Umndeni ojwayelekile
5 Ukubulala okuphelele okungu-XNUMX
6 Kulowo nalowo okwakhe
Impilo Eyimfihlo yase-ularsula Bas
Umbhali: I-Arantza Portabales
U-ularsula Bas, umbhali ophumelelayo, uphila impilo ebukeka iyisicefe eSantiago de Compostela. Ngolunye uLwesihlanu ngoFebhuwari uphuma endlini yakhe ayokwethula inkulumo emtatsheni wezincwadi futhi akabuyi. Umyeni wakhe, uLois Castro, ukugxeka ukunyamalala kwakhe ngemuva kwamahora angamashumi amabili nane. U-ularsula, ohlala evaliwe egumbini elingaphansiUmazi kahle othunjiwe wakhe - omthandayo lapho amanethiwekhi akhe azivumele khona ukuthi asongwe ngaphandle kokumelana nencane - futhi uyazi ukuthi kungekudala uzombulala.
U-Inspector Santi Abad, uphinde wahlanganiswa nombutho wamaphoyisa ngemuva konyaka nesigamu sekhefu labagula ngengqondo, nozakwabo u-Ana Barroso, osanda kuqokwa njengesekela lomhloli, baqala ukusesha okungapheli ngosizo lukaKhomishani omusha, u-Velex Veiga. Zonke izinyathelo zakho zikuholela ngase elinye icala elingaxazululiwe: ekaCatalina Fiz, yanyamalala ePontevedra eminyakeni emithathu eyedlule, nakulombulali obonakala ethathela umthetho ezandleni zakhe.
Author: UMikel Santiago
Umhleli: Izinhlelo B
Ngabe ubusuku obubodwa bungabonisa ukudalelwa kwabo bonke ababephila? Sekudlule iminyaka engaphezu kwamashumi amabili isihlabani somculo we-rock esinciphile u-Diego Letamendia agcina ukudlala edolobhaneni langakubo e-Illumbe. Lokho kwakungubusuku bokuphela kweqembu lakhe neqembu lakhe labangane, kanye nalokho kwe ukunyamalala kukaLorea, intombi yakhe. Amaphoyisa awakaze akwaze ukucacisa ngokwenzeke kule ntombazane, ebonakale iphuma ihholo lekhonsathi, sengathi ibalekela okuthile noma othile. Ngemuva kwalokho, uDiego waqala umsebenzi wakhe ophumelelayo futhi akazange abuyele edolobheni.
Lapho elinye lamalungu eqembu lezigelekeqe lishona emlilweni ongaziwa, uDiego uthatha isinqumo sokubuyela e-Illumbe. Sekudlule iminyaka eminingi futhi ukuhlangana kabusha nabangane bakudala kunzima: akekho noyedwa kubo osenguye umuntu ababenguye. Ngenkathi, kusolakala izinsolo zokuthi umlilo awenzanga ngengozi. Kungenzeka yini ukuthi konke kuhlobene nokuthi, ngokuhamba kwesikhathi, uDiego angathola izinkomba ezintsha ngokwenzeka noLorea?
Author: UMattias Edvardsson
U-Adam no-Ulrika, umbhangqwana ojwayelekile oshadile, bahlala nendodakazi yabo eneminyaka eyishumi nesishiyagalombili uStella endaweni enhle emaphethelweni eLund. Ngokubukeka, impilo yakhe iphelele ... kuze kube lusuku olulodwa le nkohliso ishunqiswe ezimpandeni zayo lapho UStella uboshelwe ukubulala indoda ngesihluku cishe iminyaka eyishumi nanhlanu emdala kunaye. Uyise, umfundisi wesonto ohlonishwayo waseSweden, nonina, ummeli owaziwayo wezokuvikela ubugebengu, kuzofanele bacabange kabusha umthetho wabo wokuziphatha njengoba bemvikela futhi bezama ukuqonda ukuthi kungani engumsolwa ophambili kuleli cala. Bazohamba ibanga elingakanani ukuvikela indodakazi yabo? Ngabe uyazi ukuthi kunjani? Futhi okukhathaza kakhulu: bayazana yini?
Author: UJoachim B. Schmidt
Umhleli: Izinhlelo zeGatopardo
UKalmann Óðinnsson ungumhlali wokuqala waseRaufarhöfn, idolobhana elincane lokudoba elisendaweni engafinyeleleki kahle e-Iceland. Uneminyaka engamashumi amathathu nane, une-autistic, futhi yize ebonwa ngomakhelwane njengesilima sedolobha, uzibiza ngenduna yomphakathi. Konke kungaphansi kokulawulwa. UKalmann uchitha izinsuku zakhe egada amathafa amakhulu azungeze leli dolobha eliwugwadule, ezingela izimpungushe ezibandayo ngesibhamu sakhe esingenakuqhathaniswa saseMauser, nokudoba oshaka baseGreenland ku-Arctic Ocean ebandayo. Kepha, kwesinye isikhathi, izintambo ze-protagonist yethu ziyawela futhi abe yingozi kuye futhi, mhlawumbe, nakwabanye ...
Ngolunye usuku, uKalmann uthola ichibi legazi eqhweni, kwaqondana ne- ukunyamalala okusolisayo kukaRobert McKenzie, indoda ecebe kakhulu eRaufarhöfn. UKalmann usezonqotshwa yizimo, kepha ngenxa yobuhlakani bakhe, ubumsulwa benhliziyo yakhe nesibindi sakhe, uzokhombisa ukuthi, njengoba umkhulu wakhe amtshela, i-IQ akuyona yonke into kulokhu kuphila. Konke kungaphansi kokulawulwa…
Ukubulala okuphelele okungu-XNUMX
Author: UPeter swanson
Eminyakeni eyishumi nanhlanu eyedlule, umlandeli wenoveli eyimfihlakalo uMalcolm Kershaw washicilela kubhulogi yesitolo sezincwadi lapho ayesebenza khona ngaleso sikhathi uhlu - olwalungatholi neze ukuvakashelwa noma ukuphawula - ngalabo ngokombono wakhe ababeyibo ubugebengu obuningi bokufeza emlandweni. Wayibiza ngokuthi Ababulali Abayisishiyagalombili Abaphelele futhi wafaka okwakudala ngamagama amakhulu ohlobo olumnyama: Agatha Christie, James M. Cain, Patricia Highsmith ...
Yingakho uKershaw, manje ongumfelwa futhi engumnikazi wesitolo esincane esizimele eBoston, engowokuqala ukubanjwa lapho i-ejenti ye-FBI ingqongqoza emnyango wayo ngosuku olubandayo lwangoFebhuwari, ifuna imininingwane ngochungechunge olucijile lwamacala okubulala angaxazululiwe sifane. labo abakhethwe nguye kulolu hlu oludala ...
Kulowo nalowo okwakhe
Author: ULeonardo Sciascia
Intambama eyisicefe ka-Agasti usokhemisi wasedolobheni elincane laseSicilian uthola umuntu ongaziwa lapho bamsongela ngokufa futhi, nokho, angakuniki ukubaluleka. Kepha, ngemuva kwezinsuku, usokhemisi ubulawa ezintabeni kanye nomunye ohloniphekile wendawo, udokotela uRoscio. Ngenkathi amahemuhemu adalulwayo edala umonakalo ongalungiseki, kanti amaphoyisa kanye ne-carabinieri bashaye izimpumputhe, nguLaurana kuphela, onguthisha ongafundile kodwa onamasiko, olandela ukuhola okungaholela kumbulali. Uthole ukuthi lo muntu ongaziwa wenziwa ngamagama anqunywe ephephandabeni lamaKatolika, i-L'Osservatore Romano, njengoba uphawu lwayo, i-Unicuique suum - "Kulowo nalowo, okwakhe" - livela ngemuva kokunqunyulwa. Futhi uzethula yena ukuze angene ngempilo yomakhelwane bakhe.
Yimaphi kulawa amanoveli obugebengu akwenza unake kakhulu? Uke wafunda omunye walaba babhali bezincwadi zobugebengu phambilini? Yabelana nathi ngamanoveli obugebengu obukade ukujabulela kamuva nje.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Izindaba » Amanoveli wobugebengu ayi-6 eza ukukuxhuma
Ukuzivocavoca kwemilenze emincane
Ungawasusa kanjani amabala etamatisi